XOG: Maxaa dhexmaray Madaxweynaha Puntland & Suldaanka Guud ee Beesha Warsangali?
November 10, 2019 NEWS 5
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa dadaal dheer ka dib wuxuu xalay la kulmay Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam oo ah Suldaanka guud ee mandiqada Sanaag & Haylaan, isagoo dhawaan aad u diiday in ay wada hadlaan, ka dib dhacdadii lagu weeraray xarunta baarlamaanka Puntland, xilkiina laga qaaday Afhayeenkii baarlamaanka Puntland CabdiXakim Dhooba-Daareed.
Sidas oo kale awood qeybsigii Puntland lagu dhisay uu kuxadgudbay oo uu sameeyey talaabo ka dhan ah, markii ay Xukuumaddiisu abaabushay mooshinkii xilka looga qaaday Afhayeenka baarlamaanka.
Kulanka, intii uu socday waxaa diiradda la saaray sidii tabashadaas xal looga gaari lahaa, iyadoo uu Madaxweynaha Puntland raaligalin ka bixiyey ficilkii lagu weeraray xarunta baarlamaanka, sidaas oo kalena wuxuu ku eedeeyey Gudoomiyihii baarlamaanka in uu ka dambeeyey is afgaran waa socday mudo oo xal loo waayay, sida uu ku dooday Siciid Deni.
Madaxtooyada Puntland ayaa bixisay Mag dhaw ku saabsan khasaarihii ka dhashay weerarkii ay ku qaaday Xarunta baarlamaanka, gaar ahaana dhimashadii Askari katirsanaa ilaalada Gudoomiyaha baarlamaanka, sidaas oo kalena ay sheegtay in ay ka xaal-bixinayso dhacdadaas.
Goobjoogayaal ayaa u xaqiijiyey PuntlandTimes in aysan jirin heshiis rasmi, waxaana sharuudaha ay Odayaashu hordhigeen Madaxweynaha Puntland ka mid ahaa in uu cadeeyo mawqifka arrintaas oo uu masuuliyadeda si bareer ah u qaato kana sheegaan warbaahinta dawladda.
Warar kale ayaa sheegaya in ay jirtay Is afgarad hoose oo labada dhinac dhexmaray, kas oo ku wajahan cidda hadda noqonaysa Afhayeenka baarlamaanka Puntland ee ay taageerayso Xukuumadda Puntland.
1.Suldaanka guud ee beesha Muxammuud Harti wuu ogyahay say wax u jiraan ee wuusan ku deg-dagayn.Isla markaas arinta hadda uu masuulka ka yahay Dhoobo Daareed ma aha mid ka mida hawlaha Suldaanka in laga fursan waayo ma ahee.Waayo waa arin siyaasadeed.Calaa kulli xaal talada Suldaanku waa muhiim in la tix galiyo oo loo raaco suu u sheego.Sababtoo ah isagaaban keenayn waxaan lagu wada qancayn.
2.Laakiin dadka badaawidaa ee suuqyada wareejinaya Warsangeli baa kacaya oo dagaalamaya ha joogiyeen beenta qayaxan.Warsangeli yuu la dirirayaa?Ma dawlada puntlaan buu la dagaalamayaa?Ma qabiilka Dani buu la dirirayaa?Ma Muxamuud Sulaymaan buu la dagaalamayaa?Haddii wax la sheegayo waa in la sheegaa wax macquul ah ama noqon kara.Dadka dibadaha jooga oo u ololaynaya dagaal uu warsangeli galo waa shaydaamiin dambiilayaal ah.Kama ay fakarin dagaal uu warsangeli soo qaado khasaaraha ka imaan doona iyo tan Dhoobo Jaan kee baa muhiim ah?Warsangeli ka miisan weeyn reer u dagaalama nin rabay in uu bur-buriyo maamulka puntlaan.
Meeshan waxa ka socdaa Ra’iisal Baarlamaanku ama Dawlada uu Madaxweynuhu gadhwadeenka ka yahay ha ka amar qaato ama xoog ayaa loo adeegsanayaa.
Dawlad hadaad maqasho waa jumlad. Jumladaas oo ay tahay hadana faracyo ayay kala leedahay. Sadex farac ayaana ugu muuq dheer. Kuwaas oo kala ah; Garaoorka oo ah maxkamadihii, Sharci dejintii oo ah Baarlamaankii ama hal aqal ha ahaado amaba Labo haka koobnaadee iyo Fulintii oo ah Dawlada dhexe.
Dawlada iyada waxa loo igmaday fulinta wixii la sharciyeeyay ee dhaqan galay. Fulintaas oo ay iyadu iskugu horeysiineyso si ay tusaale ugu noqoto intey sharciyada ku hogaamiso.
Sadexdaas gole mid walba xadbuu leeyahay iyo waajibaad u gaar ah. Weyna isku dheeli Tiran yihiin. Midna ka kale kuma xad gudbi karo. Sharci kala xadeeya ayaa jira had iyo jeerba.
Anigu Dhoobo Daareed iyo Deni makala jecli. Labaduba dhanbay iskaga key jiraan. Laakiinse Deni ayaa arintan masuuliyadeeda leh. Dhoobo meel uu inqilaab fulay ama fashilmay ku dejiyay lamana arag lamana sheegin. Dagaal muu qaadin. Baarlamaan ma xidhan. Wax cad oo lagu hayaa ma Jiro. Deni se, weerarka iasaga ayaa qaadey. Isagaa wax laayay. Isagaana jagada ka tuuray Dhoobo Daareed. 24 saacadood gudahood weliba. Taasaa inqilaab la yidhaa.
Dawlad wax inqilaabtey oo danbigey gashey cidey ka gashey ku nabeysa tan horteed lama arag. Farmaajo ayaaba dhaama oo khalad iyo sax wuxuu kharbudo aanan ka hadlin. Kkkkkk Ama isagu haku weeraro ama cid kale hakuusoo diree ama qalbi dhagax ha dhiibee afkiisa ayuu iska heystaa oo qam ka siiyaa. Deni iyo Aarajaanse danbigoodii ayay cid kale ku masabidayaan. Waa halkii abwaan dhiiranee jaamacadii indho cadeyska ayay ka soo baxeen. Kkkk
Anagu waxaasoo kale waxaanu ugu yeedhnaa ‘Waali Cas’. Kkkkk
Dawlad wax inqilaabtey oo danbigey gashey cidey ka gashey ku nabeysa tan horteed lama arag. Farmaajo ayaaba dhaama oo khalad iyo sax wuxuu kharbudo aanan ka hadlin. Kkkkkk Ama isagu haku weeraro ama cid kale hakuusoo diree ama qalbi dhagax ha dhiibee
Waxkasta waxaa ka muhiimiyad badan jiritaanka iyo dawladnimada puntland. Shaqsi kasta ee ah reer puntland waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta dowladnimada iyo kala dambeynta iyo in loo hogaansamo raacida iyo ku dhanka sharciga iyo xeerka iyo qaynunka umada reer puntland u dhigteen dhulkooda. Madaxdu heerkay doonaan ha noqdeene, waa in ay ayagu hormood u noqdaan ilaalinta xeerka puntland. Waxaana moodaa in masuuliyiintii puntland ciyaaloobeen oo dulinimo ku habsatay. Waa in qabiilka iyo sharciga masuulka ah la kala saaraa. Jagooyinka puntland hayb qabiil ma leh. In loo sameeyana waa khalad foolxuun oo juhli ku salaysan . Sida kaliya ee juhliga siyaasadeed looga bixi karo waa hal qof iyo cod. Waa shaqo baaxad weyn laakiin waa laga bixi karaa hadii quluubta reer puntland u bishishahay.
Saan filayo hadda ma joogtid ardiga puntlaan.Anna ma joogo.Laakiin Axmadoow maxay ka macne ahayd maleeshiyaadkii jilibka Dhoobo Daared ee uu soo hordhoobay baarlamaanka puntlaan?Madaxtooyada puntlaan waxaa ilaaliya ciidamo dawlada oo u gaara madaxtooyada.Maxaa meesha soo galiyey maleeshiyaad beeleed oo waliba ahaa kuwii dhawaan ka soo goostay soomaalilaan?Waa la oran karaa Dhoobo Daareed Cinqilaab buu rabay ee wuu ka fashilmay.Markii la saaray ciidamadiisii waatii la yiri xamar buu ku yiri naga soo gaara illaa anagoo nabad u fadhinay baa nala soo weeraraye.Ma aha wax la qaadan karo in maleeshiyaad jilib hoose la soo galiyo xarunta laga xukumo puntlaan oo dhan.Tan kale muranka Dhoobo iyo Deni mar horuu jirey oo la sheegi jirey oo ma aha wax ka soo bilaamay ciidamadii soo galay madaxtooyada puntlaan.
Haah oo masuulkii ka soo bixi waaya shaqadiisa xoog iyo xeelba waa loo adeegsanayaa.Dhoobo dareed waxuu ahaa wasiiru baarlamaan wuuna ku qaldanaa in uu maleeshiyaad soo galiyo madaxtooyada.